5 Best Day Trips avy Vienne mba hahitana Aotrisy | Save A Train
Home > Travel Europe > 5 Best Day Trips avy Vienne mba hahitana Aotrisy
Fotoana famakiana: 4 minitra(Last Nohavaozina: 12/03/2021)
Vienna dia malaza Travel toerana itodiana, mazàna satria tsara tarehy izy io ary tanàna misy zavatra betsaka hatolotra
Na izany aza, izany ihany koa tanàna voahodidina maro hafa mahaliana tianao. Raha manam-potoana ho an'ny andro iray lavitra avy any Vienne, aiza no tokony tsinjovy? Nahazo sosokevitra vitsivitsy izay azo antoka manaova ny fialan-tsasatrao any Aotrisy zavatra maro kokoa. koa, dia afaka mahazo ny mahita toerana sasany fa raha tsy izany dia mety tsy ho fotoana hamangiana. Mba jereo kely ny lisitra 5 Best Day Trips avy Vienne mba hahitana Aotrisy mba tianao!
Hallstatt tanteraka ho an'ny andro iray lavitra avy any Vienne, satria tsy mitondra ela loatra mba hijery, ary izany dia tena manaitra. Na izany aza, raha toa ianao ka nandray ny fiaran-dalamby ho Hallstatt, hanombohana izany maraina, ka dia hanana fotoana ampy. Izany no iray amin'ireo andro lava indrindra fitsangatsanganana avy any Vienne, ary Tena ilaina ny fandaminana tsara. fa, Rehefa misy, misy zavatra be dia be ny hankafy. fiakaran'ny, naka sary, na mamaly ny ranomandry lava-bato tao amin'ny ririnina rehetra safidy tsara.
Munich ny Hallstatt Lamasinina
Innsbruck ho Hallstatt Lamasinina
Passau ny Hallstatt Lamasinina
Rosenheim ho Hallstatt Lamasinina
Salzburg dia mora azo idirana amin'ny alalan'ny fiaran-dalamby avy any Vienne, ary izany no iray amin'ireo andro hanintona indrindra fitsangatsanganana. Ohatra, in Salzburg, dia afaka hijery ny afovoan-tanàna manan-tantara sy ny trano tsara tarehy Santionan'izany fiangaly. Avy eo misy ny Hobensalzburg Fortress, izay hanome anao ny tsara indrindra tao an-tanàna fijery.
Fanampin'izany, afaka hitsidika Mozart ny an-trano, ankehitriny tranom-bakoka amin-javatra be dia be mba hianatra momba ny mpamoron-kira malaza. kokoa, azonao atao ny mitsidika ny Salzburg katedraly izay natao batisa.
3. Andro Trip To Lainzer Wildlife Park
Raha mitady ho afa-maina avy any an-tanàna ho iray andro lavitra, Manana be dia be ny safidy. Ny iray amin'izy ireo dia ny Lainzer Valan-javaboary, izay afaka mahita ao amin'ny Vienna Woods. Its beautiful nature with ancient oak and birch trees will make you feel like you have stepped into a fairytale.
Taloha, ity toerana ity dia toerana tena fihazana fonenan'ny olona ambony maro. ankehitriny, tsy afaka mihaza, nefa afaka hankafy tsara tarehy tongotra lavitra lalana ary koa ny fomba fijery avy amin'ny Hubertuswarte Observatory.
Nuremberg any Vienne Lamasinina
Stuttgart any Vienne Lamasinina
fotsiny 40 minitra diany avy any Vienne, dia afaka mahita io farihy Gem - Laxenburg Castle. Ny toerana dia indray mandeha tsena tanàna, fa ankehitriny dia manompo amin'ny maha-tsara tarehy ankoatra ny Viennas hatsarany. Ohatra, afaka hankafy ny iray amin'ireo trano fisakafoanana maro, sunlit saha ary na dia sambo avy tao amin'ny farihy.
Ao amin'ny manodidina an'i Vienne, misy voninahitra Moyen Âge lapa dia afaka hijery. Kreuzenstein Mampahatsiahy maro mpandeha ny mahagaga Hogwarts, noho ny tilikambo sy ny tilikambo. Inona no more, dia manome manam-paharoa, mahatalanjona ny fomba fijeriny ny Vienna Woods sy ny Danube. Fanampin'izany, ny Leobendorf tanàna dia akaiky ny, izay mety ho tsara nijanona ho anao amin'ny andro lavitra.
Cologne any Vienne Lamasinina
Vonona ny mahita ny zava-drehetra tsy maintsy hanatitra Vienna raha ny amin'ny andro fitsangatsanganana? Akory va ny 5 Best Day Trips avy Vienne mba hahitana Aotrisy, ny diany dia ho very maina izany. Miomàna hankafy ny fialan-tsasatra, ary ho azo antoka ny Boky Ny Fiaran-Dalamby Tapakila ara-potoana!
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “5 Best Day Trips avy Vienne mba hahitana Aotrisy” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome voninahitra fotsiny amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-day-trips-from-vienna%2F%3Flang%3Dmg- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
#traveleurope Daytrips eurotrip fiaran-dalamby nankany travelaustria traveltips